एजेन्सी, एक अध्ययनअनुसार स्त्रीले आफ्नो जीवनमा फरक–फरक खालको यौन अनुभव गर्न चाहान्छन् । उनीहरु यौनका विषयमा धेरै नै अनौंठा कुराहरु सोच्ने गरेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । जस्तैः चरम सन्तुष्टि, आसन, यौनिक अभ्यासलगायत थुप्रै कुराबारे युवतीहरु जिज्ञासु हुन्छन् । युवतीहरु पहिलो यौन सम्पर्कमा चाहने कुराहरु सुहाग रात निर्वस्त्र चरम सन्तुष्टि आत्मियता नौलो मान्छेसँग यौन सम्बन्ध […]
सम्भोग र यौन सन्तुष्टिबारे योनीको विशेषता
मानिसहरू चरम यौन सन्तुष्टि पाउन अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । कति पुरुष महिलाको योनी कसिलो नभएको कारणले यौन सन्तुष्टि नपाएको कुराले चिन्तित हुने गरेको पाइएको छ । तपाईहरु दुईजना जो यौनसम्पर्कमा सहभागि हुनुहुन्छ तपाईहरु कत्तिको सहज तरिकाले यौन क्रियाकलापमा सहभागि हुनुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ । यौन सम्पर्कको बेलामा योनीका मांशपेशीहरु संकुचन गर्ने अथवा […]
हाम्रो शरीरमा यौन सम्पर्कवाट हुने फाईदाहरु
हाम्रो समाजमा यौन सम्पर्क भन्ने शब्द सुन्दा मात्र अचम्म मान्ने गर्दछ । तर यसको आवश्यकता बुझ्ने हो भने निकै नै महत्व रहेको छ । हरेको व्यक्तिको स्वास्थ्यकोलागी यौन सम्पर्क एक महत्वपुर्ण पक्ष मानिन्छ । तरपनि हाम्रो समाजमा यौन सम्बन्धि कुरा गर्न लाज मानिन्छ । खास कुरा यो हो कि नियमित सेक्स राम्रो स्वास्थ्यको साँचो हो […]
यौन उत्तेजनाको समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुने गर्दछ । महिलाहरुमा उत्तेजनाको बेला यौनाङ्ग मुलायम भै फैलिने र रसिलो हुने प्रक्रियामा गड्बडी हुने समस्या हुन्छ । धेरै महिलाहरुमा डर, त्रास, संकोच जस्ता मनोगत कारणहरुले पनि यौन उत्तेजना आउदैन । केहि महिलाहरुमा संक्रमण, हर्मोनको समस्या वा अन्य कुनै औषधिको सेवनले पनि यौन उत्तेजना नआउने हुन्छ । […]
पाठेघर भन्दा बाहिर बच्चा बस्ने कारण लक्षण
गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य जाँच गराउँदा डाक्टरले ‘तपाईको बच्चा ठाउँमा बसेको छैन’ भन्ने गर्छन् । यो कहिलेकाहीँ आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । समान्यतया बच्चा पाठेघरमा हुर्किन्छ । तर, कहिलेकाही बच्चा पाठेघरमा नबसी पाठेघरबाहिर बसिदिन्छ । पाठेघरबाहिर फ्यालोपियन ट्युब हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा पाठेघरबाहिर बस्ने बच्चा यही ट्युबमा बस्नेगर्छ । यसबाहेक बच्चा कहिलेकाहीँ अण्डकोष, […]
२९ भदौ, काठमाडौँ । के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक कहाँ उपचारका लागि जानु आवश्यक छ । पिसाब सङ्क्रमण मिर्गौलाबाट पिसाबको थैली हुँदै पिसाबको नलीबाट बाहिर निस्कदै जुनसुकै ठाउँमा किटाणुले हुने सङ्क्रमण […]
सेक्ससम्बन्धी अनौठा तथ्य
यौन स्वास्थ्य सम्बन्धिमा वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान पश्चात बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गरेका छन । वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका केहि तथ्यहरु निम्नानुसार छन; पुरुष वीर्य महिलाको योनिभित्र ५ दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । ५ दिनको अवधिमा यसले महिलाको अण्डालाई सेचन पनि गर्न सक्छ । तर, बाहिरी वातावरणमा भएको वीर्य केही घण्टामात्रै बाँच्न सक्छ । यदि पोथी फेरिट (दुम्सीजस्तो एक […]
यौन दुर्बलता अधिकांश कारण पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सकिदैन । किनकी वंशानुगत समस्या र पोलिसाइटिक ओभरी सिन्ड्रोमको जस्ता समस्याको उपचार कठिन हुन्छ । त्यस्तै ३५ वर्षभन्दा माथिको मानिसको यौन दुर्बलता पनि समस्या पनि समाधान हुदैन् । महिलाहरुमा विभिन्न कारणले गर्भवती हँुदैन । बाह्य जीवनशैलीले पनि गर्भधारण हुनबाट बञ्चित गर्छ । चाहेको समयमा गर्भधारण नहुनु र […]
अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग गर्छन् । लिंगको आकार ठूलो हुँदैमा यौन सन्तुष्टि मिल्ने कुरा गलत भएको मेडिकल साइन्सले पुष्टि गरिसकेको छ। […]
के तपाईलाई थाहा छ ? नियमित ध्यान गरे गुमेको सेक्स उर्जा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । शायद थाहा नहुनसक्छ होला । यदि यौन उतेजनामा पनि समस्या छ भने ध्यान गरेर सुधार ल्याउन सकिन्छ । सेक्स जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने ध्यान र योगको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । यौन चाहना नहुनु, शीघ्रस्खलन जस्ता समस्या छ भने […]
शरीरलाई स्वस्थ र फिट राख्नका लागि पानीको अहम भूमिका रहेको हुन्छ । मानव शरीरमा पानीको मात्रा ५० देखि ६० प्रतिशत रहेको हुन्छ । पानीले शरीरका अंगहरुको रक्षा गरेको हुन्छ साथसाथै कोषहरुसम्म पोषक तत्व पुगाउन र अक्सीजन पुगाउन काम पनि पानीले गरेको हुन्छ । एकछिन सोचौँ, जब एक सामान्य व्यक्तिले पानी पिउनुको यति धेरै महत्व छ […]
महिलालाई सेक्सवाट यस्ता हुन्छन् फाईदाहरु
महिलाहरुले यौन सम्पर्कका समयमा अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्दछन्, सँगै उनीहरुका लागि बिभिन्न किसिमका मानसिक तथा शारीरिक फाईदा पनि हुन्छ । यौन सम्पर्कले महिलाहरुको शारीरिक संरचनामा समेत परिवर्तन आउँदछ । यौनसम्पर्कका समयमा सेक्स पार्टनरबाट प्राप्त भावनात्मक सहयोगले महिलाहरुमा आत्मविश्वास बढ्दछ । यौन सम्पर्कको चाहान हर समय हुने भए पनि रजस्वला सकिएको ५ देखि ७ दिनसम्म महिलाहरुमा […]
यौन सम्बन्ध राख्नका लागि महिलाले देखाउने यस्ता छन् संकेत
कुनै पनि महिलालाई बुझ्न निकै कठिन हुन्छ । कतिपय महिलाहरु त आफ्ना भावनालाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्दैनन् । उनीहरु संकेत मात्र गर्छन् । तर उनीहरुको संकेतलाई पुरुषहरु बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा पुरुषहरुले महिलाले गर्ने संकेतलाई कसरी बुझ्ने त ? ध्यानदिनुपर्ने कुरा के हो भने महिलाको ‘बडी ल्यांगवेज’ र केही संकेतमाथि विचार पु¥याउनुपर्दछ । ती […]
यौन सबैको चासोको विषय हो । त्यसैले यौनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सबैको रुची हुन्छ । तर यति धेरै रुचीको विषय हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यौन स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न मानविय गुण तथा व्यवहार र यथार्थ तथ्यको बारेमा धेरै जानकारी हुँदैन । दुनियाँमा जन्म, मृत्यु जस्तै यौन पनि साश्वत सत्य हो । सृष्टि चक्र सञ्चालनका लागि यो अनिवार्य सर्त […]
गर्भ नरहनुका अन्य विभिन्न कारण भएपनि केही कारण यस्ता छन्
बदलिंदो समय र व्यस्त जीवन शैलीबीच एक समस्या समाजमा बढ्दै गएको देखिन्छ , त्यो हो फर्टिलिटीको समस्या । यसको कारणले अहिले धेरै परिवारमा तनाव उत्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । गर्भाधारण नहुनुमा धेरै कारण हुन सक्छ । प्रायः यस्तो मानिन्छ कि विवाह भएको एक वर्ष भित्रमा यदि गर्भाधारण भएन भने श्रीमान् या श्रीमतीमा फर्टिलिटिको समस्या हुन […]
हस्तमैथुन यौन सुख प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो यौन क्रियाकलापको रुपमा रहेको पाइन्छ । अझै पनि समाजमा हस्तमैथुन गर्नु धार्मिक रुपले अपराध जस्तै मानिन्छ । यौवनावस्थामा पुगेका महिलाहरुले आफ्नो क्लइटरिस (भगसेफ) वरीपरीको भागमा स्पर्श गरेर हस्तमैथुन गर्ने गर्छन् । किशोरावस्थामा गरिने यौन क्रियाकलापमध्ये हस्तमैथुन दोश्रोमा पर्दछ । युवतीहरु प्राय हस्तमैथुन गर्ने गर्दछन् । यौन स्वास्थ्य व्यवहारको […]
यौन सम्पर्क र गर्भावती हुनु प्राकृतिक कुरा हो, त्यसैले प्राकृतिक कुरा भएकोले दुबैलाई सँगै मिलाएर लान सकिन्छ । यो अवस्था एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था पनि हो । लगातार यौन सम्पर्क गरिरहँदा जब महिनावारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०र१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा गर्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार यौनसम्पर्क गर्दा गर्भपतन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यी […]
बिहानको समयमा सेक्स गर्दाको फाइदाहरु
सेक्स मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मानिसहरुले सेक्स गर्ने समय खासै ख्याल गरेको हुदैनन् । धेरैले रातको समयमा सेक्स गर्ने गर्छन् । तर पछिल्लो समयमा एक अध्ययनले बिहानिपख गरिने सेक्स प्रभाबकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । बेल्फास्टको क्विन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले दाबी गरे अनुसार जुन दम्पतीले हप्तामा तीन पटक बिहानको समयमा यौन सम्बन्ध […]
यौन सम्पर्कका बेला महिलाले गर्ने गल्ती
खुसी जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो यौन सम्पर्क पनि हो । सुखद दाम्पत्य जीवनका लागि महिला र पुरुष दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । एउटासँग कुशल सीप नहुँदा सम्बन्धमा नै उतार चढाव आउन सक्छ । यौन सम्पर्कका बेला महिलाले गर्ने गल्तीहरु: १. यौनाङ्गको सफाई: महिलाहरु तयार रहनुहोस् । कुनै पनि पुरुष यौन सम्पर्कको बेला चार कोषे झाडीको […]